Niteraka ny #M7Challenge Tao Amin’ny Twitter Ny Filoha Ongandey Miresaka Amin’ny Finday Eny Amoron-dalana · Global Voices teny Malagasy
Niteraka ny #M7Challenge Tao Amin'ny Twitter Ny Filoha Ongandey Miresaka Amin'ny Finday Eny Amoron-dalana
Voadika ny 16 Jolay 2016 12:26 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, नेपाली, Español, English
Sary nalefan'ny Sekreteran'ny gazetin'ny Fiadidian'ny filoham-pirenena, Don Wanyama tao amin'ny Facebook, mampiseho ny filoha Ogandey Yoweri Museveni miresaka amin'ny finday eny amoron-dalana.
Rakotry ny sary-sy-soratra mampihomehy ny Twitter rehefa nipoitra tamin'ny aterineto ny sary mampiseho ny Filoha Ogandey Yoweri Museveni mipetraka amin'ny seza eny amoron-dalana mba hanao antso. Nijanona nandritra ny 30 minitra noho izy mbola miresaka amin'ny finday ireo fiara mpanaraka azy, izay teny an-dalana hamonjy lanonam-bahoaka.
Nandefa ny sary tao amin'ny pejy Facebook-ny miaraka amin'izao hafatra manaraka izao ny Sekreteran-gazetin'ny Filoham-pirenena, Don Wanyama:
Teny an-dalana avy tany amin'ny Distrikan'i Isingiro izay nitarihany ny fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Mponina, nijanona tao amin'ny tanàna Kyeirumba ny Filoha Museveni mba hanao antso am-pinday. Nitangorona nijery ny filoha ireo mponina te hahalala, ka taorian'ny 30 minitra teo amin'ny finday, niresaka fohy tamin'ireo mponina izy. Nisaotra ny governemanta izy ireo noho ny fanaovana ho lasa tara (godorao) ny lalana mampitohy an'i Oganda amin'i Tanzania mandalo an'i Isingiro.
Nanontany tena ny olona sasany raha natao ny sary mba hanodinana ny saina amin'ny vaovaon'ny famotsorana ilay mpanao politika mpanohitra lehibe indrindra Kizza Besigye, izay tany am-ponja nandritra ny roa volana noho ny fiampangana famadihan-tanindrazana.
Saingy be paikady loatra ny #M7Challenge mba hanakonana ny famotsorana an'i Besigye manjaka amin'ny aterineto
Nampiasaina ny tenirohy #M7Challenge mba hampisehoana ny sarin'ny Ogandey sy ny olon-kafa manerana izao tontolo izao mandray antso eny amoron-dalana. Nopetahana anarana M7 ny Filoha Museveni noho ny fanenon'ny anarany. Nandefa sary namboarina mamazivazy ny filoha ireo mpisera Twitter hafa.
Tsy mbola fantatra izay niresaka tamin'i Museveni tamin'ny finday na ny zavatra noresahana.
Nilaza ny mpisera Twitter iray fa niresaka tamin'ny mpitarika tao Sodana Atsimo, izay nipoahan'ny herisetra manakorontana i Museveni:
#M7Challenge : Azo antoka fa mety niresaka momba ny “Avelao handeha ny oloko” niaraka tamin'ny mpitondra ao Sodàna Atsimo i M7.
Nanome baiko ny tafika Ongadey mba hanala ireo Ogandey monina ao Sodàna Atsimo i Museveni taorian'ny fifandonana vao haingana tao an-drenivohitra, Juba.
Nampitandrina ireo mpandray anjara amin'ny #M7Challenge i Rosebell Kagumire mba tsy hanandrana ity fitsipika ity:
Aza manandrana izany any an-trano. Antsoy aloha ny ekipa mpamorona harena #M7Challenge
Fredrick Tumusiime nizara dokambarotra voalaza fa ho an'ny fahitalavitra ao an-toerana ao Oganda:
Alohan'ny hanesoran'i @ntvuganda ny sioka ☺
Mpisera Twitter hafa nitondra ny sezan'ny biraon'izy ireo any ivelany hanaovana antso:
Mathias Wandera nampiseho an'i Museveni mandray antso eny amin'ny volana:
Hehe. Nandeha tamin'ny toerana i Sevo. Mahatsiaro sambatra izy ankehitriny. Hilaza ireo mpankahala fa sary namboarina izany.
Ny fanamby araka ny hitan'i AutoblogKE dia ny toro-hevitra tsara ho an'ny mpamily:
haha ry namana, iza no afaka mametraka ny #M7Challenge tsara indrindra?? Mino aho fa fomba tsara ny miteny hoe AJANONY NY MANORATRA HAFATRA/ MIANTSO AMIN'NY FINDAY REHEFA MITONDRA FIARA
Naka ny sariny #M7Challenge teny amin'ny lalan'ny mpandeha an-tongotra i Omara Ronnie mba haneho fanajana ireo rehetra mpampiasa lalana:
Lalana avokoa ny rehetra….mampiseho fanajana ny mpampiasa lalana rehetra
iAfrikan nampiseho ny ekipam-pirenena Portiogey mankalaza ny Euro2016 raha mbola sahirana amin'ny finday i Museveni:
Handeha hilaza ireo mpankahala hoe “sary namboarina” io
Nandefa ny sarin'ny filohan'i Zimbaboe Robert Mugabe mandohalika eo anoloan'i Museveni i Mathias Wandera:
Mitohy amin'ny andro hafa ny sary-sy-soratra momba an'i Museveni? Hehe. Mahafinaritra andeha hanao izany
Nanasongadina ity sary manaraka mampiseho ny mpilalao amin'ny Games of Thrones (Lalao Seza Fiandrianana) i Ory Okolloh Mwangi
Nanao ny anjarany koa ny ankizy:
nivadika zavatra hafa ny #M7Challenge.
Mandritra izany, miandry ny anjarany amin'ny fanamby i Michael Kwambo:
Ry namana….ampahafantaro ahy azafady rehefa anjarako ny #M7Challenge ..avelao aho hiandry am-paharetana…